» भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा दक्षिण कोरियाली पुर्वराष्ट्रपति लाई पुन: जेल चलान! यस्तो फैसला नेपालमा कहिले होला? भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा दक्षिण कोरियाली पुर्वराष्ट्रपति लाई पुन: जेल चलान! यस्तो फैसला नेपालमा कहिले होला? – हाम्रो खबर
भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा दक्षिण कोरियाली पुर्वराष्ट्रपति लाई पुन: जेल चलान! यस्तो फैसला नेपालमा कहिले होला?
१४ कात्तिक, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली पूर्वराष्ट्रपति ली म्युङ वाकलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार भ्रष्टाचार अभियोगमा १७ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति तथा उदारवादी नेता रो मु–ह्युनमाथि पनि भ्रष्टाचार आरोप लागेको थियो । उनले आत्महत्या गरेका थिए । उनी वर्तमान राष्ट्रपति मून जाय–इनका राजनीतिक गुरू थिए । उनको राष्ट्रपति कार्यकालमा मून राजनीतिक सल्लाहकार थिए ।